Hay’adda Socdaalka Soomaaliya oo Sheegtay Iney Diiwaangelineyso Ajaaniibta Dalka ku sugan – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaHay’adda Socdaalka Soomaaliya oo Sheegtay Iney Diiwaangelineyso Ajaaniibta Dalka ku sugan
Hiiraan Xog, Apr 19, 2018:- Hay’dda Socdaalka iyo Jinsiyadaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay diiwaangelineyso dhammaan ajaaniibta ku sugan dalka, si loo ogaado kuwa sharciga kusoo galay iyo kuwa kale.
Agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha, Maxamed Aadan Jimcaale (Koofi) ayaa sheegay in ay jiraan ajaaniib dalalkooda dambiyo kasoo galay oo gudaha dalka ku dhuumanaya.
Waxa uu tilmaamay Koofi, in si loo ogaado cidda dalka fasax loo siiyey iney timaado iyo kuwa kale ee xuduudaha kasoo gudbay ay muhiim tahay in la diiwaangeliyo, lana eego sax ahaanshiyaha dal ku galkooda.
“Dowladdu waxay waddaa diiwaangelinta ajaaniibta, waxaa jira kuwo badan oo dalalkooda dambi kasoo galay, yimidna gudaha dalka, waxaa muhiim ah in ajaaniibta markii ay yimaadaan ay u hoggaansamaan sharciyada dalka u yaalla, waxaan diyaarinnay hadda hababkii dadkaasi lagu diiwaangelin lahaa, wixii dalalkooda dambiyo kasoo galayna lagu wareejiyo hay’adaha ammaanka” ayuu yiri agaasime Koofi.
Dhanka kale, Maxamed Aadan Koofi ayaa sheegay in ka hay’ad ahaan ay gudanayaan waajibka saaran, loona aabayeeli doonin cid walbo oo sharciga dalka u yaalla hareer marta.
Soomaaliya meello badan oo ka mid ah waxaa ku nool dad aan dhalasho ahaan dalka u dhalan, balse si qaxootinimo ah dalka kusoo galay, kuwaasi oo illaa iyo iminka aan si rasmi ah dowladda ugu diiwaangalsaneyn.